Posted on October 18, 2017 October 19, 2017 Amandla High LED-Flood Khanyisa Abakhiqizi
Industrial LED Lighting iyona zalapho ngokuyinhloko umugqa ngamunye ukukhiqizwa, okuyinto uthathwa njengomgcini inhliziyo inkampani ngoba hhayi kuphela silwenza izimpahla fresh afundwa emakethe, kodwa futhi ukubuyisa izinto ukungasebenzi iyokhandwa. Ngaphandle ukusetshenziswa Industrial LED Lighting, ifektri awukwazi ukusebenza 24/7 futhi ngaleyo ndlela kunciphise kahle ukukhiqizwa. Ngaphandle operation okuqhubekayo, ukuphepha, kungenye into sidinga ukukhathazeka. Industrial Lights Ifanele unga ukunciphisa okuvela kuyo ingozi ngoba, ukuhlola kwamuva kubonisa ukuthi kukhona kakhulu ubudlelwano phakathi dim zokusebenza imvelo & futhi ingozi eyenzeka embonini. Njengoba umnikazi we imboni, ubungeke ube uzimisele ukubona uma kukhona abasebenzi ukulimala. Ngokwalokhu esesixoxe ngakho isidingo, TACHYON Lights manufactures High Quality Industrial LED Lights that illuminate factory, warehouse, lapha kwakhiwa khona ngamabhlogo, mining area and similar large area with highly uniform & izibani uzamcolo zezimboni elikhanyayo LED.
Izinzuzo Industrial yethu LED Lights
Kukhona ndathane LED imikhiqizo ukukhanyisa ezimbonini emakethe. Kungani ngidinga ukukhetha umkhiqizo a TACHYON sika ukwenza? Okokuqala esinalo ukushisa okukhethekile uhlelo ukushabalalisa & isilawuli lokushisa uhlelo. ukushisa eziphikelelayo owenza imiphumela eyingozi ku LED ukukhanyisa chips, ikakhulukazi imboni okwakuhilela lokushisa ukusebenza eliphezulu. I obukhulu Aluminium amaphiko ukunikeza enkulukazi i-surface area for ukushabalalisa ukushisa Wemboni LED Lighting. Ngaphandle, singamukela design evulekile Industrial LED Lighting, okusho kukhona isikhala kanye nesakhiwo eziyize phakathi nomugqa Chips LED ngaphakathi izibani zezimboni ngamunye ukuthi ukuvumela umoya ukupholisa.
Okwesibili, TACHYON yethu Industrial LED Lighting uphasisa 80,000 amahora Life Span test. imboni & imisebenzi ezimbonini Floodlight ngoba 80,000 amahora, noma 20-25 iminyaka. Ukubaluleka wukuthi anidingi ukuba esikhundleni uzamcolo ukukhanya lwemidlalo ngakho njalo futhi ngaleyo ndlela kuncishiswe izindleko zakho. Lapho eqhathanisa isimo ukuze ezivamile ukukhanyisa izixazululo, selecting LED Flood Lights is a wise choice because LED generally have 5 ukuze 10 times life span of traditional Metal Halide or HID.
Apart from heat dissipation and life span, our Industrial LED Lighting use quality CREE & OSRAM LED Chips, which allow us to manufacturer High Power LED Floodlights having 150 LM / W, which is 10 ukuze 12 times of incandescent light bulb. Lokhu okusezingeni eliphezulu ukukhanyisa kahle kungasiza ukunciphisa ugesi wakho Bill ngoba ungasebenzisa isamba ezincane eneji ukukhiqiza kungakhanyi ukukhanya efanayo noma ngisho licace lapho eqhathanisa ezivamile Metal Halide Izibani. Ngakho, kungani ungahloli ushintshele ku-Industrial LED Lighting?
Umkhiqizo Uphenyo ku LED Industrial Lights
Sicela uzizwe ukhululekile uphonsa us umlayezo uma udinga usizo ngezibani amaphrojekthi akho. unjiniyela wethu izokunikeza High Quality & DIALux MAHHALA umbiko sekulingisa futhi akunike intengo engcono wasekhaya i-Flood-Lights.